पूर्वराजदूत झा हत्या : किन सुल्झाउन सकेन प्रहरीले रहस्य?
नेपाल लाइभ सोमबार, कात्तिक १२, २०७५, ००:१४:५९
काठमाडौं- पूर्वराजदूत केशवराज झाको बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा हत्या भएको दुई महिना नाघिसकेको छ। गत भदौ ३ गते राति चक्कु प्रहारबाट ८० वर्षीय वयोवृद्ध झाको हत्या भएको थियो। हत्यालगत्तै अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा नजिक पुग्न सकेको छैन। यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी नै राखेको छ।
हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले झाको हत्यालाई रहस्यमय मध्येको एक भएको बताएको छ। अनुसन्धानमा खटिएको महाशाखाकाले अहिलेसम्म झाको हत्या किन र कसले गर्‍यो पत्ता लगाउन सकेको छैन। हत्याको अनुसन्धान गरिरहेका महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर भन्छन् ‘एकमदै प्रोफेसनल तरिकाले हत्या गरिएको छ। यस्तो जटिल केसका अनुसन्धान लामो समयसम्म पनि जान सक्छ।’
अहिलेसम्म अनुसन्धानमा प्रगति नभएको राठौरको भनाई छ। सोधपुछ र बयान लिने काम बाहेक प्रहरीले नयाँ तथ्य फेला पार्न सकेको छैन। प्रहरीले झा हत्याको अनुसन्धानको सिलसिलामा अहिलेसम्म ४ सय जनाभन्दा बढीसँग सोधपुछ गरिसकेको जनाएको छ। तर परिणाम भने शून्य छ।
घटना मोड्न नाटक
_x000D_ हत्यामा परिवारका सदस्यको पनि संलग्नता हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। अहिले पनि प्रहरीले परिवारका सदस्यलाई बेला-बेलामा सोधपुछ गरिरहेको बताउँदै आएको छ।घटनाको दुई दिनअघि विदेश गएका झाका छोरा–बुहारी हत्यापछि नेपाल फर्किएका थिए। बाबुको अन्त्येष्टि र अन्तिम कर्ममा सहभागी भएर बुहारी फेरि विदेश फर्किसकेकी छिन् भने छोरा किरणराज झासँग प्रहरी पटक-पटक सोधपुछ गरिरहेको बताएको छ। महाशाखाको एक प्रहरीका अनुसार अहिले प्रहरीको अनुसन्धान परिवारभित्रै बढी केन्द्रित छ। जसका केही कारण पनि रहेको बताइएको छ।
झ्याल बन्द हुनु र कोठाको ढोका खुल्ला हुनु, गेटमा बसेको पालेले कोही आए/गएको थाहा नपाउनुले आशंका गर्ने ठाउँ भएको प्रहरी स्रोतले बतायो।
यतिमात्रै होइन, झाको भान्साकोठाको चक्कुबाटै उनको हत्या हुनु र झ्यालको जाली पटक-पटक च्यातिएको हुनुले हत्या गरेर घटना अन्यत्र मोड्न नाटक गरेको देखिएको महाशाखाका एक प्रहरी अधिकारीले बताए। ती प्रहरीले भने ‘घरको सिसा फुटेको र जाली काटिएका घटना यसअघि पनि पटक-पटक भएको पाइयो। जसकारण हत्या गरेर घटना अन्यत्र मोड्नका लागि नाटक गरेजस्तो देखिन्छ।’
यसकारण हत्यामा परिवारका सदस्य र आफन्तहरु प्रहरीको शंकाको घेरामा छन्। हत्याको अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।
झाको हत्या हुनुभन्दा २ दिनअघिदेखि नै नयाँ फौजदारी कानून र मुलुकी अपराध संहिता लागु भएको थियो। महाशाखाका एक प्रहरीका अनुसार नयाँ अपराध संहिताका कारण पनि घटना पत्ता लाग्न केही गाह्रो भएको छ। एक प्रहरीले भने ‘हामीले आशंका गरेका व्यक्ति स्वयम् पीडित छन्। पीडितलाई थप पीडा दिएर अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँ छैन।’
कतिपय अवस्थामा अभियुक्तले फकाएको भरमा कुरा खोल्ने नगरेकाले सामान्य यातना पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर नयाँ अपराध संहिताले यातना दिन नमिल्ने भएकाले अनुसन्धानमा केही जटिलता भएको एक प्रहरीले बताए।
पक्राउ परेर छुटेकामाथि अझै निगरानी
_x000D_ झाको हत्या आरोपमा महाशाखाको टोलीले झाकै घरमा पाले बसेका सानुकान्छा तामाङ, माली आइतसिंह तामाङ र भान्छे जयबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। भदौ २९ गते ८/८ हजार रुपैयाँ धरौटीमा उनीहरु छुटेका थिए। उनीहरुको पोलिग्राफ परीक्षणमा पनि केही नदेखिएकाले धरौटीमा रिहा भएका थिए। अहिले झाको घरको सुरक्षा गार्ड, मालीसमेत परिवर्तन गरिएको छ।
आशंका गरेर पक्राउ गरिएका व्यक्ति निर्दोष देखिएर छुटेपछि प्रहरीलाई हत्यारा पत्ता लगाउन थप चुनौती थपिएको थियो। यद्यपि पक्राउ परेर छुटेका निर्दोष देखिए पनि प्रहरीले भने उनीहरुमा निगरानी बढाइरहेको छ। महाशाखाका एसपी राठौर भन्छन् ‘उनीहरु छुटेका मात्रै हुन् । हाम्रै निगरानीमा छन्। केही क्लु फेला परे फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्। हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
हत्या योजनाबद्ध र पेसेवरबाट
_x000D_ प्रहरीले घटनास्थलबाट झाको हत्यामा प्रयोग गरिएको चक्कुलगायत अन्य प्रमाण फेला पारेको थियो। तर चक्कुको ल्याब टेस्ट गर्दासमेत कसैको फिंगर प्रिन्टसँग नमिलेको प्रहरीले जनाएको छ। चक्कुमा समेत कुनै प्रमाण नछोड्नुले हत्या योजनाबद्ध र पेसेवरबाटै भएको हुनसक्ने पनि प्रहरीको आँकलन छ।
चक्कुमा फिंगर प्रिन्ट फेला नपरेपछि प्रहरीले पञ्जा लगाएर हत्या गरेको आशंका गरेको थियो। झाको घरबाहिर फालिएको पञ्जा प्रहरीले प्रमाणका रुपमा उठाए पनि त्यसबाट समेत कुनै तथ्य फेला पर्न सकेन। प्रहरीले बरामद गरेको पञ्जा हत्या गर्दा प्रयोग नगरेको पाइएको छ।
तालिम प्राप्त कुकुर लगेर घटनास्थलमा स्न्याफिङ गराउँदा समेत हत्याको क्लु फेला पर्न सकेन। कुकुरले संकेत गरेअनुुसार पालेलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुस्न्धान गर्दा उनी निर्दोष देखिए।
सबैतिरका गेट बन्द भएको घरमा हत्याराहरु कसरी प्रवेश गरे? झ्यालको जाली काट्दा कोठामा रहेकी श्रीमतीले किन थाहा पाइनन्? कसैसँग पनि रिसइबी नभएको भद्र परिवारका सदस्यलाई किन आक्रमण भयो? घरमा रहेको कुकुर त्यो रात किन भुकेन? जस्ता प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन्। यसको जवाफ अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले समेत पाउन सकेको छैन।
ढल्यो टकलाको अपराध राज : बम विष्फोटमा जन्मकैद, अब भ्रष्ट पनि ठहर कुनै समय जनकपुरमा एकछत्र रजगज थियो सञ्जय साह (टकला) को। आर्थिक, राजनीतिक दुवैतिर पावरफुल। पार्टीको मतलवै भएन। टिकट पायो कि जित पक्का... ४ घण्टा पहिले
नेपाल लाइभमा बिहीबार : टेप प्रकरणमा बाँस्कोटाको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीदेखि यती समूहका नवाङ् जेल चलानसम्म बिहीबार नेपाल लाइभमा प्रकाशित मुख्य समाचार शीर्षकहरू: ५ घण्टा पहिले
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न जापानभर विद्यालयहरु बन्द ६ घण्टा पहिले
ढल्यो टकलाको अपराध राज : बम विष्फोटमा जन्मकैद, अब भ्रष्ट पनि ठहर ४ घण्टा पहिले
नेपाल लाइभमा बिहीबार : टेप प्रकरणमा बाँस्कोटाको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीदेखि यती समूहका नवाङ् जेल चलानसम्म ५ घण्टा पहिले
रेमिट्यान्स व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक ६ घण्टा पहिले
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का २२ निर्णय ७ घण्टा पहिले